Mactracker waa la cusboonaysiiyay isagoo ku daray MacBook Pro cusub iyo sixid | waxaan ka imid mac
Codsiga ugu fiican ee lagu ogaanayo si faahfaahsan dhammaan sifooyinka, qiimaha, taariikhda la sii daayo iyo xogta kale ee aaladaha Apple waa shaki la'aan Mactracker. Tani encyclopedia weyn Apple qaab app hadda updated for Mac ku darista 14-inch MacBook Pros cusub, 16-inch MacBook Pros oo si cad ugu daray qaar ka mid ah hagaajinta cayayaanka.
Dhammaan kuwa aan haysan app-ka lagala soo bixi Mac-gooda way samayn karaan gabi ahaanba waa bilaash ka Mac App Store. Shaki la'aan waa codsiga ugu fiican ee lagu ogaanayo dhammaan faahfaahinta aaladaha Apple iyo softiweerka, laga bilaabo Apple I ugu horreeyay ilaa 16-inch MacBook Pro ee ugu dambeeyay.
Tani waa codsiga aad u baahan tahay inaad ogaato wax walba oo ku saabsan qalabka Apple
Tani waa mid ka mid ah codsiyada aan waligood ka daalin in aan ku taliyo waxaan ahay Mac waana in macluumaad kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato qalabka Apple, software-ka ama wax la mid ah ayaa laga heli doonaa. Waa mid ka mid ah codsiyada had iyo jeer lagu rakibay Mac-kayga oo iga caawiya marar badan ogow mid kasta oo ka mid ah faahfaahinta alaabta shirkadda ka yimid Cupertino.
Soo hel badeecada lambarka aqoonsiga, taariikhda lagu soo bandhigay suuqa ama xitaa qiimihiisii ​​bilowga ahaa oo leh qaar ka mid ah tayada app-kan. Shaki la'aan, waa codsi gebi ahaanba lagu taliyay. Waan heli karnaa Mactracker ee Mac App Store gabi ahaanba waa bilaash. Halkan hoose waxaan kaaga tagnay xiriirka tooska ah ee dukaanka codsiga Mac, laakiin sidoo kale waxaad haysataa Mactracker diyaar u ah aaladaha iOS.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » Mactracker waa la cusboonaysiiyay isagoo ku daraya MacBookga cusub iyo hagaajinta